WZỌ 6 IJI DOZIE 'OK GOOGLE' ANAGHỊ ARỤ ỌRỤ - ADỤ
Wzọ 6 iji dozie OK Google Adịghị arụ ọrụ
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na onye na - enyere gị aka na Google Voice anaghị arụ ọrụ? Ikekwe, Google gị dị mma abụghị nke ahụ. Amaara m na ọ nwere ike ịbụ ihe ihere mgbe ị na-eti mkpu OK Google n'elu olu gị ọ naghị aza. Ọ D, MMA, Google bụ akụkụ bara ezigbo uru. You nwere ike ịlele ihu igwe dị mfe, nweta mkpirisi okwu gị kwa ụbọchị, ma chọta Ezi ntụziaka ọhụrụ, wdg dịka nke ahụ, na-eji olu gị. Ma, ọ nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu mgbe ọ naghị arụ ọrụ. Nke ahụ bụ ihe anyị nọ ebe a maka!
Ọ dị mma Google nwere ike ịkwụsị ịzaghachi ma ọ bụrụ na ntọala gị ezighi ezi ma ọ bụ ọ bụrụ na ịgbanweghị ya na Google Assistant. Oge ụfọdụ, Google enweghị ike ịmata olu gị. Ma nwee obi ụtọ maka gị, ọ dịghị achọ nkà na ụzụ pụrụ iche iji dozie esemokwu a. Anyị abanyela ọtụtụ ụzọ iji dozie Google dị mma.
6 6zọ Idozi Ok Google-adịghị arụ ọrụ?
Usoro 1: Gbaa mbọ hụ na Kwado iwu Google dị mma
2zọ nke 2: Weghachi ezigbo Igwe Okwu Google
Usoro 3: Clear Cache maka Google App
Usoro 4: Mee nyocha Mic
Usoro 5: Weghachi Google App
Method 6: Lelee Asụsụ Ntọala
Iche iche Fixes:
Ezi njikọ internetntanetị
Gbanyụọ onye enyemaka olu ọ bụla ọzọ
Melite ngwa Google
Rụgharịa ngwaọrụ gị
Gbanyụọ Batrị nchekwa ma na-agbanwe batrị Mode
Soro usoro ndị a iji pụta na nsogbu a.
Ọ bụrụ na ntọala adịghị mma, ọ nwere ike ịbụ obere nsogbu. Ihe mbu na mbu kwesiri ijide n’aka na iwu Google gi di nma gbanyere.
Iji mee nke a, soro usoro ndị a iji mee ka iwu Google dị mma:
1. Pịa ma jide Ulo bọtịnụ.
2. Pịa na Ihe ngosi kompas na oke ala aka nri.
3. Ugbu a pịa gị profaịlụ foto ma ọ bụ mkpado n'aka nri n'elu.
4. Enweta na Ntọala , wee họrọ Onye enyemaka .
5. Pịgharịa gaa na ala na ị ga-ahụ Ngwaọrụ enyemaka ngalaba, mgbe ahụ ịnyagharịa ngwaọrụ gị.
6. Ọ bụrụ na ụdị ngwa Google gị dị 7.1 ma ọ bụ n'okpuru, enyere Kwuo OK Google oge obula.
7. Chọta Google Assistant na nwee toggle n'akụkụ ya.
8. vnyagharịa na Egwuregwu Voice ngalaba, ma gbanwee na Nweta ya na Voice Voice mode.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gam akporo gị anaghị akwado Google Assistant, soro usoro ndị a ka ị gbanwee na OK Google:
1. Gaa na Google ngwa .
2. Pịa na Ọzọ nhọrọ na ala-aka nri nke ngosipụta.
3. Ugbu a, enweta na Ntọala wee gaa Olu nhọrọ.
4. vnyagharịa Egwuregwu Voice na ngosipụta wee gbanwee na Nweta ya na Voice Voice mode.
Nke a ga-enyere gị aka Idozi OK Google Not Work nke.
Mgbe ụfọdụ, ndị na-enyere olu aka nwere ike ịnwe nhịahụ ịmata olu gị. N’okwu ahụ, ị ​​ga-azụzigharị ụdị olu a. N'otu aka ahụ, Enyemaka Google chọkwara ọzụzụ ọzọ maka olu iji melite nzaghachi gị na olu gị.
Soro ntuziaka ndị a iji mụta otu esi esi zụlite ụdị olu gị maka Google Assistant:
2. Ugbu a, họrọ Ihe ngosi kompas na oke ala aka nri.
3. Pịa na gị profaịlụ foto ma ọ bụ mkpado na ngosipụta.
Ọ bụrụ na ụdị ngwa Google gị bụ 7.1 na n'okpuru:
1. Pịa na Ọ dị mma Google button wee họrọ Hichapụ ụdị olu. Pịa Ọ DỊ MMA .
2. Ugbu a, gbanye Kwuo OK Google n'oge ọ bụla .
Iji dekọọ olu gị, soro usoro ndị a:
1. Gaa na Ntọala nhọrọ wee pịa Onye enyemaka .
2. Họrọ Egwuregwu Voice .
3. Pịa na Kụzie onye Nyere gị olu gị ọzọ nhọrọ wee pịa Megharịa maka nkwenye.
Etu ị ga-esi zụlite ụdị olu gị ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gam akporo gị anaghị akwado Google Assistant:
1. Gaa na Google ngwa.
2. Ugbu a, pịa na Igodo ndị ọzọ na ala-nri ngalaba nke ngosi.
3. Kpatụ Ntọala wee pịa Olu.
4. Enweta na Egwuregwu Voice .
5. Họrọ Hichapụ ụdị olu , pịa Ọ DỊ MMA maka nkwenye.
6. N'ikpeazụ, gbanwee na Nweta ya na Voice Voice nhọrọ.
Ikpochapụ Cache na data nwere ike ibutu ngwaọrụ gị na data na-enweghị isi na achọghị. Usoro a agaghị eme ka Google Voice Assistant gị rụọ ọrụ kamakwa ọ ga-eme ka arụmọrụ ekwentị gị ka mma. Ntọala App nwere ike ịdị iche na ngwaọrụ na ngwaọrụ mana usoro iji dozie nsogbu a ka ga-adị otu.
Soro ntuziaka n'okpuru ka ikpochapụ cache na data nke Google App:
1. Gaa na Ntọala Ngwa ma chọta Ngwa.
2. Nanyagharịa Jikwaa ngwa wee chọọ Google App . Họrọ ya.
3. Ugbu a, pịa na Nchekwa nhọrọ.
4. Kpatụ na Clear Cache nhọrọ.
Successfully ugbu a ọma kpochapụ Cache nke ọrụ Google na ngwaọrụ gị.
OK Google kachasị dabere na igwe okwu ngwaọrụ gị, ọ ka mma ịlele ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ. Ọtụtụ mgbe, Igwe na-emerụ emerụ nwere ike ịbụ naanị ihe kpatara ya n'azụ 'Ọ Dị Google' iwu anaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo gị.
Iji mee igwe nyocha, gaa na ngwa ndekọ ndabara ekwentị gị ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ ọ bụla ma dekọọ olu gị. Lelee ma ndekọ ahụ dị ka ọ kwesịrị ịdị ma ọ bụ ọzọ, mezie igwe okwu ngwaọrụ gị.
Ihichapụ ngwa ahụ na ngwaọrụ gị wee budata ya ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ ebube maka App ahụ. Ọ bụrụ na ihichapu oghere na data anaghị arụ ọrụ maka gị, ịnwere ike ịnwale ịmegharị Google App. Iwepu usoro bụ nnọọ mfe dị ka ọ na-adịghị agụnye ọ bụla mgbagwoju nzọụkwụ.
Nwere ike ime ya site na ịgbaso usoro ndị a dị mfe:
1. Gaa na Playlọ Ahịa Google wee lee anya maka Google App .
2. Pịa ‘ Iwepụ ’Nhọrọ.
3. Ozugbo emechara nke a, Reboot ngwaọrụ gị.
4. Ugbu a, na-aga Playlọ Ahịa Google ọzọ na anya n'ihi na Google App .
5. Wụnye ya na ngwaọrụ gị. Emere gị ebe a.
Ọzọkwa Gụọ: Etu esi gbanyụọ Google Assistant na gam akporo Ngwaọrụ
N'oge ụfọdụ, mgbe ịhọrọ ntọala asụsụ na-ezighi ezi, iwu 'OK Google' anaghị aza. Gbaa mbọ hụ na nke a anaghị eme.
Iji nye ya nlele, soro usoro ndị a:
1. Mepee ngwa Google ma họrọ Ọzọ nhọrọ.
2. Ugbu a, na-aga Ntọala na ịnyagharịa Olu .
3. Enweta na Asụsụ ma hota ezi asụsụ diri mpaghara gi.
Enwere m olileanya na usoro ndị ahụ nyere aka ma ị nwere ike idozi nsogbu Google na-adịghị arụ ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị ka rapaara mgbe ahụ enwere ụzọ dị iche iche idozi ị kwesịrị ịnwale tupu ịnye olile anya idozi okwu a.
Chọrọ ezigbo njikọ internetntanetị iji nwee ike iji Google Voice Assistant. Gbaa mbọ hụ na ịnwe netwọkụ mkpanaka ma ọ bụ njikọ Wi-Fi iji mee ka ọ rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Samsung, jide n'aka na ị gbanyụọ Bixby , ma ọ bụghị, ọ nwere ike ịmepụta nsogbu maka iwu Google gị dị mma. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-eji enyemaka olu ọ bụla ọzọ, dị ka Alexa ma ọ bụ Cortana, ị nwere ike ịchọ iwepu ma ọ bụ hichapụ ha.
Jiri ngwa Google App kachasị ọhụrụ dịka ọ nwere ike idozi nsogbu chinchi nsogbu. Ihe ikwesiri ime bu:
1. Gaa na Storelọ ahịa ma chọta Google App.
2. Họrọ Mmelite nhọrọ ma chere maka mmelite ibudata ma wụnye.
3. Ugbu a, gbalịa iji App ọzọ.
Gbaa mbọ hụ na inwere nyere ikikere niile maka ngwa Google. Iji lelee ngwa ahụ nwere ikike kwesịrị ekwesị:
1. Gaa na Ntọala nhọrọ ma chọta Ngwa.
2. Nanyagharịa Google ngwa na mpịakọta-ala ndepụta na toggle on Ikike.
Ọtụtụ mgbe, ibidogharịa ngwaọrụ gam akporo gị na-edozi nsogbu ọ bụla. Nye ya ohere, regharịa ekwentị gị. Ma eleghị anya, Google Voice Assistant ga-amalite ọrụ.
1. Pịa ma jide Igodo ike .
2. vnyagharịa na Reboot / Malitegharịa ekwentị bọtịnụ na ihuenyo ma họrọ ya.
Enwere ohere di elu na iwu gi ‘di nma Google’ n’emeputa nsogbu nihi batrị Battery na Adaptive Battery mode ma onwere. Battery nchekwa mode ebelata ego nke batrị ojiji na nwekwara ike belata njikọ yourntanetị. Gbaa mbọ hụ na ọ gbanyụrụ tupu iji Google dị mma.
1. Gaa na Ntọala ngwa ma chọta Batrị nhọrọ. Họrọ ya.
2. Họrọ Agbanwe Battery , ma gbanwee ihe ndị ahụ Jiri batrị na-agbanwe agbanwe Gbanyụọ
sd kaadị egosighi windo
3. Pịa na Batrị nchekwa Mode Ọzọkwa Gbanyụọ ya .
Olileanya, gị Google Voice Assistant ga-arụ ọrụ ugbu a nke ọma.
Na-atụ aro: Idozi O di nwute na Google Play Services akwụsịla Ije Ozi
OK Google bụ ihe kachasị mma na Google App ma nwee ike ịda mbà mgbe ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ ma ọ bụ azaghị ya. Olileanya, anyị gara nke ọma idozi nsogbu gị. Ka anyị mara ihe kacha masị gị banyere atụmatụ a? Anyị enwere ike inyere gị aka pụọ ​​na ndị a hacks? Kedu nke kachasị gị mma?
windo alt taabụ anaghị arụ ọrụ
diski njikwa ugbu a n'ọrụ nkebi abịakọrọ
gịnị kpatara vidiyo vidio anaghị ebudata
enweghị ụda mgbe windo 10 melite 2019
windo 10 anaghị emechi mgbe emesịrị
kedu ihe mere chrome ji akwusi oru